သုံးသပ်ချက်များနှင့်သုံးသပ်ချက်များနှင့်ဝယ်သူရည်ရွယ်သည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 5, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရခဲ့သည် Jeff Quipp Search Engine People, SEO နှင့်အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတခု၏။ ဂျက်ဖ်ငါမှာငါရှိခဲ့သည် ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာအပေါ် panel ကို moderated Toronto ရှိ Marketing Expo နှင့် eMetrics Conference ကိုရှာပါ နှင့် Gil Reich, ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ VP မှာ Answers.com.
ဂျက်ဖ်သည်သော့ချက်တစ်ချောင်း - visit ည့်သည်၏ရည်ရွယ်ချက် - ငါတို့ဖောက်သည်များနှင့်အတူတကွရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်အမြဲကြိုးစားနေသည်။ ဂျက်ဖ်သို့နှစ်ခု segments များကွဲကွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစား နှင့် ထိခြင်း ဝယ်ယူသူနှင့် ratings နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ညံ့ဖျင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည် ၀ ယ်ခြင်းအပြုအမူအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Lightspeed Research မှလေ့လာမှုတစ်ခုကို Jeff ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။
စားသုံးသူ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအွန်လိုင်းတွင်ဖတ်ကြသည် ရှေ့မှာ ဝယ်ယူ။
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့်စားသုံးသူ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသည် အခြား စားသုံးသူများ၏ထင်မြင်ချက်များ။
စားသုံးသူများ၏ ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်သူတို့ထံမှယုံကြည်ရသောထင်မြင်ချက်များကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည် သိထား.
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့်စားသုံးသူ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းကပြန်လည်သုံးသပ်ချက် ၂ ခုရှိသည် ပြောင်းလဲသွားတယ် သူတို့ရဲ့စိတ်တွေ။
သုံးစွဲသူများ၏ ၇% သာပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏လူမှုရေးကွန်ရက်များသို့လှည့်ပြီးကျန်များသည်စျေးဝယ်နှိုင်းယှဉ်သည့်နေရာများသို့လည်းကောင်း၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်.
Youtube ကို လင့်များ၊ အကြိုက်များနှင့်မှတ်ချက်များသည်ဗီဒီယိုအဆင့်အတန်းကိုသက်ရောက်သည်။
ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှရလဒ်များ (Bing မှ, Google) ဆက်စပ်သုံးသပ်ချက်များရှိသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအရေအတွက်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအကြိမ်ရေနှင့်ကြိမ်နှုန်းများသည်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များက Yelp ကဲ့သို့သောအခြားတတိယပါတီပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆိုဒ်များမှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုဆွဲယူသည်။
ဂူးဂဲလ်၏ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေမှုအင်္ဂါရပ်ကသင့်အားရှာဖွေမှုရလဒ်မှဆိုဒ်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ လူအများအပြားက၎င်းကိုအဆင့်နိမ့်စွာသတ်မှတ်ထားပါက၎င်းသည်ဆိုက်တစ်ခု၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသက်ရောက်နိုင်ပါသလား။ ဖြစ်နိုင်သည်။
Online နှင့်မကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရသောကုမ္ပဏီများအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာမဟုတ်ပါ။ အပျက်သဘောဆောင်သောသုံးသပ်ချက်ကြောင့်ကုမ္ပဏီမှတုံ့ပြန်မှုရရှိခဲ့သူများ၏ ၃၃% အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်တင်ခဲ့သည်။ ၃၄% ကသူတို့၏အနှုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုလုံးဝဖျက်ပစ်လိုက်သည်။
ဂျက်ဖ်၏တင်ဆက်မှုသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုကိုပြောခြင်းအပြင်လူမှုရေးမီဒီယာပြောဆိုမှုများကိုရှာဖွေမှုရလဒ်များသို့တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရန်ဂူဂဲလ်၏အဆင့်များ။ ဒီစာရင်းအင်းတွေထဲကသင်ခန်းစာကတော့မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအွန်လိုင်းမှာမြှင့်တင်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသေချာဖို့ပဲ။ သင့်ဖောက်သည်များအားပြန်လည်သုံးသပ်မှုများပေးရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့တင်သွင်းရမည်ကိုပြရန်ပြောပါ။ ထိုအခြေအနေများကိုသင်ပြန်ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်အပျက်သဘောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပြissuesနာများကိုတုန့်ပြန်ပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့်ညံ့ဖျင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်အလားအလာဝယ်လက်လှည့်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကျော်။ ကြည့်ပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆိုဒ်များပေါ်တွင်သင်၏ဂုဏ်သတင်းကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ သူတို့ကဝယ်ယူအပြုအမူ impact ပါလိမ့်မယ်။
Tags: 2011Answ.comဝယ်ရည်ရွယ်ချက်Gil Reichဂျက်ဖ်lightspeed ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းratingsသုံးသပ်ချက်များနှင့်သုံးသပ်ချက်များreviews
သင်၏အီးမေးလ်လက်မှတ်ကို WiseStamp နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း
မေလ 6, 2011 မှာ 2: 44 AM
ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနေသော ကားပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းမှ မကြာသေးမီက အီးမေးလ်တစ်စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ အွန်လိုင်းမားကတ်တင်းကို စတင်အသုံးပြုသည့် အသေးစား၊ တည်နေရာလုပ်ငန်း။ ကျွန်ုပ်လတ်တလောဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အလုပ်အကြောင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တင်မည်ဆိုပါက ၎င်းတို့သည် အနာဂတ်ပြုပြင်မှုအတွက် ဒေါ်လာ 10 ကူပွန်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကမ်းလှမ်းချက်သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုလာရောက်လည်ပတ်ပြီး တစ်ပတ်အကြာတွင် ရောက်ရှိလာမှုနည်းပါးသည်။ ၎င်းသည် တစ်ကြိမ်တည်းသာ ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်အား ၎င်းတို့၏ ဆိုက်သို့ ပို့ဆောင်ရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု တွေးခဲ့သည်။